हिजो हामीले गोली थापेकाले तिमीहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उपराष्ट्रपति भयौ: जनयुद्धका घाइते | Corporate Nepal
काठमाडौं । जनमुक्ति सेना घाइते तथा अपाङ्ग संघ नेपालले एक साताभित्र आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले सरकारलाई जनयुद्धका घाइतेहरुले उठाएका मागहरु नीतिगत रुपमा समाधान गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएको हो । संघका प्रदेश–२ संयोजक रमेश कालिकोटेले एक साताभित्र आफूहरुले अघि सारेका मागहरु पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘मुलुकमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन हाम्रो योग्दान सानो छैन् । हामीले लडेर जीवनको बलिदानसँग साटिएको गणतन्त्रमा हाम्रो अवस्था सडकमा छ । हाम्रो शरिरमा भएको गोली र छर्रा निकाल्न अहिले हामीले सकिरहेका छैनौं, हामीले धेरैपटक सरकारलाई आफ्ना पीडा सुनायौं तर समस्या समाधान भएनन्, आश्वासन मात्रै दिने समास्या समाधानको लागि काम नगर्ने स्थिति छ ।’
जनयुद्धका बेलामा विभिन्न मोर्चामा रहेर परिवर्तनको लागि बलिदान दिएका मानिसहरुलाई कुनै पद नचाहिएको बताउँदै कालिकोटेले निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, बालबालिको लागि उच्च शिक्षा प्रदान, गणतन्त्र सेनानीको परिचयपत्र प्रदान, गाँस वासको व्यवस्था, यति मागहरु नीतिगत रुपमा पूरा गरे आफूहरुलाई राहत हुनेथियो भन्ने धारणा राखे ।
संघका प्रदेश–३ संयोजक मोहन योञ्जनले आफूहरुले हिजोका दिनहरुमा स्कुल पढ्ने समयमा बन्दुक बोकेकोले परिवर्तन सम्भव भएको बताए । उनले भने, ‘तर, आज हामी सडकमा छौं । रोएर आँसु पुछ्नुपर्ने स्थिति छ । परिवर्तनको लागि आफ्न्त गुमाएका छौं । घाइते छौं । बिहान खाए बेलुका के खाउँ ? को स्थिति छ ।’
नेकपाका नेताहरुलाई छातिमा लाग्ने गोली आफूहरुले थापेको सुनाउँदै योञ्नले भने, ‘आज उहाँहरु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । मन्त्री बन्नुभयो । उपराष्ट्रपति बन्नुभयो । तर हाम्रो स्थिति यति नाजुक छ । उहाँहरुको हाईफाईको जीवन छ । यस्तो किन भयो ? हामीले पद मागेका छैनौं हामीले त बाँच्न पाउने अधिकार मात्रै मागेका छौं ।’
उनले नेकपाकै सरकार भएको बेला समेत आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुन नसके कुनैबेला पनि आफूहरु अकल्पनीय निर्णय लिने बताएका छन् ।
पूर्वलडाकुहरुले माओवादी शिविरमा करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने २८ कमाण्डरको नाम सार्वजनिक गर्ने